ठूलो रिजुम लागि दस रिजुम सुझावहरू | USAHello देखि काम स्रोतहरू | USAHello
तपाईं राम्रो काम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं एक ठूलो रिजुम आवश्यक हुनेछ! यहाँ छन् 10 तपाईं एक अमेरिकी-शैली रिजुम लेख्न मद्दत गर्न सुझाव र एउटा भिडियो फेरि.
एक रिजुम तपाईं आफ्नो सम्पर्क जानकारी विवरण सिर्जना गर्न कागजात छ, तपाईंले चाहेको काम, आफ्नो योग्यता, कार्य अनुभव, शैक्षिक पृष्ठभूमि, र अन्य जानकारी. यो तपाईं स्थिति को लागि योग्य छन् किन नियोक्ता बताउँछ.
आफ्नो रिजुम पहिलो कुरा तिनीहरूले काम गर्नु साक्षात्कार गर्न चाहनुहुन्छ भने एक कम्पनी जब उनि निर्णय देखो हुनेछ. कम्पनीहरु रिजुमेहरू सयौं प्राप्त. जब आफ्नो रिजुम मा कसैले देखिन्छ, तपाईँले छ 10 व्यक्तिको प्रभावित सेकेन्ड. को कर्मचारी आफ्नो सहकर्मीहरू तपाईं सिक्न चाहन्छ र त्यो सम्झना. बनाउन शब्द प्रयोग गर्न निश्चित “म”, भन्दा “हामी”. तपाईं आफैलाई बारेमा कुरा गर्न प्रयोग हुन सक्छ. तर, यो काम खोज प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक महत्वपूर्ण भाग हो. धेरै शरणार्थी र आप्रवासी ठूलो अनुभव र सीप छ तर राम्रो रिजुम आवश्यक.
निश्चित यसलाई पढ्न सजिलो छ. यसलाई बोल्ड बनाउन र हाकिमहरूले पढ्नका लागि सजिलो छ कि आफ्नो नाम को एक छोटो संस्करण प्रयोग विचार. तपाईंको बीचको नाम समावेश गर्छन्, विशेष गरी यदि यो लामो छ.
2. पक्का एउटा "अमेरिकी" फोन नम्बर र इमेल ठेगाना प्रयोग बनाउन
कहिलेकाहीं, शरणार्थी वा आप्रवासी एक WhatsApp नम्बर वा अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर प्रयोग. एक U.S.A प्रयोग. फोन नम्बर र यो एशिया | मा मानक ढाँचा प्रयोग लेख्न. ए, जो यस जस्तै जान्छ- कोष्ठकमा क्षेत्र कोड, पहिलो तीन संख्या, त्यसपछि ड्यास, त्यसपछि अर्को चार नम्बर: (503) 544-1195.
एउटा सजिलो पुनः प्रकार प्रयोग, अमेरिकी इमेल ठेगाना. एउटा इमेल ठेगाना जस्तै विदेश मा कि समाप्त प्रयोग नगर्नुहोस्: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. सट्टा, U.S.A टाइप गर्न सजिलो प्रयोग. इ - मेल ठेगाना. जस्तै: mo.ali@gmail.com. र यो इमेल ठेगाना जाँच गर्न सम्झना! एक राम्रो विचार एउटा इमेल ठेगाना सबै काम आवेदन बस प्रयोग गर्ने गरेको छ.
3. चाँडै समीक्षा गर्न सजिलो छ कि एक लेआउट प्रयोग
यो निश्चित सबै बनाउन बुझ्न सजिलो छ मतलब. के तपाईं पक्का सबै रेखाहरू अप हरेक क्षेत्रको लागि नै ढाँचा प्रयोग र गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. तिमी सक्छौ हाम्रो वेबसाइटमा निःशुल्क रिजुम टेम्पलेट डाउनलोड.
4. को रिजुम माथि आफ्नो अमेरिकी आधारित काम वा स्वयंसेवक अनुभव राख्न
तपाईंले बोल्ने कुनै भाषा सूची, तपाईं मात्र बोल्न वा ती भाषामा लेख्न भने सहित. अंग्रेजी समावेश छैन. तपाईं उचित व्याकरण असल रिजुम गरेर तपाईं अंग्रेजी पोख्त छन् देखाउन, पूँजीकरण, र ढाँचा.
6. तपाईंको स्वयंसेवक अनुभव समावेश गर्ने पक्का हुन
9. बनाउन आफ्नो फन्ट सम्पूर्ण रिजुम लागि नै हो पक्का.
तपाईं यसलाई आफ्नो रिजुम मा सबै पाठ निश्चित हुन सक्छन् एक सानो तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नै फन्ट छ. अक्सर, जब तपाईं रिजुम गर्दै, तपाईं अर्को कागजात आफ्नो पाठ को भागहरु प्रतिलिपि विशेष गरी यदि, फन्ट गल्ति परिवर्तन हुन सक्छ. यो हेर्न गर्न भ्रामक बनाउँछ. गर्न आफ्नो फन्ट सही छ पक्का, आफ्नो सबै पाठ चयन. एक पटक सबै पाठ प्रकाश पारिएको छ, फन्ट र आकार चयन. प्रयोग गर्न दुई राम्रो फन्टहरू टाइम्स न्यू रोमन र एरियल छन्. आकार प्रयोग 10 वा 12 आफ्नो रिजुम पढ्न सजिलो बनाउन फन्ट.
तपाईं एक शब्द कागजात वा कागजातको अन्य प्रकार आफ्नो रिजुम बाहिर पठाउन भने, यसलाई परिवर्तन वा SPOILED प्राप्त हुन सक्छ. यो तपाईं चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै बाटो हेर्न हुनेछ भनेर एक PDF फाइल रूपमा पठाउन राम्रो छ. तर बनाउन तपाईंले साथै शब्द ढाँचामा सुरक्षित संस्करण छ भनेर पक्का. तपाईं आफ्नो रिजुम गर्न सम्पादन गर्न यो संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
को को एक भिडियो हेर्न 10 रिजुम सुझावहरू
प्रवेश स्तर भूमिकाको लागि थप रिजुम सुझावहरू
व्यावसायिक भूमिकाको लागि थप रिजुम सुझावहरू
कम्पनीहरु रिजुम ट्रयाकिङ सिस्टम काम आवेदन फिल्टर प्रयोग. सबै भन्दा जब लागि, मानव आफ्नो रिजुम पढेर छैन. सट्टा, कम्प्युटरमा हेर्न आफ्नो रिजुम मा शब्द मेल यदि काम विवरण देख छ. एक पोस्ट काम सामान्यतया आवेदन सयौं प्राप्त.
आफ्नो रिजुम शायद एक कम्प्युटर समीक्षा छ. यो तपाईं एक काम विशेष रिजुम सिर्जना निश्चित छ मतलब. प्रत्येक समय तपाईं लागू, तपाईं काम विवरण जाँच र यसलाई आफ्नो रिजुम मेल गर्न आवश्यक. एक काम विशेष रिजुम काम विवरण देखि हरेक शब्द समावेश गर्न छैन. किवर्ड खोज्न. किवर्ड सबैभन्दा अक्सर प्रयोग गरिन्छ कि शब्द र वाक्यांश छन्. धेरै कीवर्ड अन्तर्गत सूचीबद्ध “आवश्यक सीप” खण्ड. जस्तै, यदि तपाईंले प्रशासनिक सहायक हुन लागू गर्दै, तपाईं जस्तो शब्द याद “दाखिला”, “भेटघाट बनाउने”, र “निर्धारण” धेरै प्रयोग.
काम विशिष्ट रिजुम लेखन धेरै समान अर्थ अन्य शब्दहरू शब्द परिवर्तन समावेश हुन सक्छ. जस्तै, तपाईं एक "सामग्री लेखक" चाहन्छ कि काम को लागि लागू हुन सक्छ. तपाईंले पहिले एक "सामग्री निर्माता" को रूपमा काम गरेको हुन सक्छ. अर्को उदाहरण वाक्यांश परिवर्तन हुन सक्छ “नयाँ कार्यकर्ता लागि देख्यो” गर्न “recruited कर्मचारीहरु”.
यो प्रक्रिया समय र अभ्यास लिन्छ. सुरु गर्न सजिलो तरिका बाहिर छाप्न काम वर्णन छ. केही समय लाग्न र हाइलाइट र रेखांकन शब्दहरू तपाईंले महत्त्वपूर्ण छन् लाग्छ. आफ्नो रिजुम तिनीहरूलाई थप्न. इमानदारी महत्त्वपूर्ण छ भनेर सम्झना. तपाईं छैन कि कुनै पनि कौशल समावेश छैन. तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ लागि उपयोगी वेबसाइट भनिन्छ jobscan.co. तपाईं आफ्नो रिजुम र काम विवरण अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पर्याप्त शब्द र वाक्यांश लागि लागू गर्दै काम र आफ्नो रिजुम बीच मेल खाने यदि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ केही छन् भने, तपाईं एक साक्षात्कार रही आफ्नो संभावना वृद्धि गर्न थप थप्न सक्नुहुन्छ.
हाम्रो मा रिजुम उदाहरण पृष्ठ, तपाईं आधारभूत रिजुम लागि एक सरल ढाँचा पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो आवेदन अनुरूप शब्द मा ढाँचा डाउनलोड गर्न सक्षम र यसलाई परिवर्तन हुनेछ.